Sawirro: Fanaan Soomaali ah oo qarka u saaran in laga soo masaafuriyo Mareykanka - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Fanaan Soomaali ah oo qarka u saaran in laga soo masaafuriyo...
Sawirro: Fanaan Soomaali ah oo qarka u saaran in laga soo masaafuriyo Mareykanka
Minneapolis (Caasimada Online) – Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa garab siinaya fanaan Soomaaliyeed oo caan ah oo wajahaya in loo masaafuriyo Soomaaliya.
Cumar Cusmaan Maxamed oo loo yaqaan Cumar Shooli ayaa la dagaalamaya isku day ay ku masaafurineyso dowladda Mareykanka, sababo la xiriira xukun maxkamadeed oo la xiriira daroogo oo ku dhacay 2008.
Cumar Shooli ayaa ballan la lahaa waaxda socdaalka federaalka Mareykanka Khamiistii shalay, si dib loogu eego kiiskiisa.
“Waxaan ahay qof isbeddelay, waxaana halkan joogaa ku dhowaad nolosheeda oo idil. Dib uma laaban karo,” ayuu yiri Cumar Shooli oo la hadlay wargeyska Star Tribune.
Cumar Shooli oo ah 42 jir ayaa ka mid ah fanaaniinta ugu caansan Soomaalida, wuxuuna qaadaa heeso u badan kuwa Xamariga.
Mid ka mid ah heesihiisa ayaa qabtay indhaha kooxda Al-Shabaab oo sheegtay inay ka hor-imaneyso diinta Islaamka, waxayna ugu hanjabeen inay dili doonaan, sida uu sheegay Cumar Shooli.
Garsoore Maxkamad socdaal ayaa laba goor sheegay in Shooli la dili karo ama uu wajihi karo waxyeello xooggan haddii loo masaafuriyo Soomaaliya, sababo la xiriira maqaamka uu ka jooga Soomaalida iyo saameynta uu leeyahay.
Hase yeeshee go’aankaas ayaa la nasakhay laba goor, kadib markii ay racfaan ka qaateen saraakiisha Socdaalka Mareykanka, sida uu sheegay qareenka Shooli oo lagu magacaabo John Bruning.
“Waxaan sii wadnaa inaan la dagaalno kiiskiisa. Waxaan rajeyneynaa in waaxda ICE ay u ogolaan doonto inuu sii joogo Mareykanka oo uu la noolaado xaaskiisa iyo caruurtiisa.”
Shooli ayaa Mareykanka ku yimdi qaxootinimo 1996-kii, wuxuuna degay gobolka Michigan oo uu ka dhigtay dugsi sare. Wuxuu Minnesota u guuray 2000, si uu fanaan u noqdo.
Shooli oo ah aabaha shan caruur ah, ayaa 2008 waxaa lagu qabtay khaat, isaga iyo saaxiibadiisa, waxaana lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin been xalaaleyn lacag iyo inuu soo dhoofiyo khaat kana ganacsado.
“ICE waxay weli wadaan inay doonayaan inay masaafuriyaan sababo la xiriira khaatkii lagu qabtay 2008 oo ah caleen aan waxba dhaamin coffee-ga ama tobaakada,” ayuu yiri qareenkiisa Bruning.
Shooli ayaa afar sano xabsi ku qaatay kadib markii 2017-kii lagu helay kiis la xiriira caymis la qiyamaeeyey, waxaana kadib dib usoo noolaaday isku dayga la doonayo ina lagu masaafuriyo.
Masaafurinta dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ayaa sare u kacday xilligii uu madaxweyne ahaa Donald Trump. Sanadkii tegay waxaa la masaafuriyey 47 qof, taasi oo aad uga yar dadkii la masaafuriyey sanadkii ugu dambeeyey madaxtinimada Trump ee 2020 oo ahaa 112.